JioChat အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（15.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် JioChat: HD Video Call
JioChat သည် Android, iPhone နှင့် Jiipoophone တို့တွင်ရရှိနိုင်သောဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းများမှသင်၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကိုဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုနိုင်ပြီ။ ထို့အပြင်ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်ခြင်း, အသံခေါ်ဆိုမှုများ, ပုံပြင်များနှင့်ပတ်သက်သောစာနာမှုအရွယ်ဗီဒီယိုများနှင့်ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်များအကြောင်းကိုကြည့်ပါ။
jochat တွင်မည်သည့်မိုဘိုင်းနံပါတ်ဖြင့်မဆိုသင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ Fi (ရရှိနိုင်) ကိုသင့်အားမက်ဆေ့ခ်ျကိုခွင့်ပြုရန်, ဗီဒီယိုများကိုခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်နာရီစောင့်ကြည့်ပါ။
◆ from ◆ from ◆အခမဲ့အင်ဒူးများ။ Call Toriff ကိုသင်ဘယ်တော့မှမလိုအပ်ပါ။ (မှတ်ချက် - အချက်အလက်စွဲချက်များလျှောက်ထားနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အတွက်သင်၏ပံ့ပိုးသူကိုဆက်သွယ်ပါ။ )
video ကွန်ဖရင့်။ သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုများနှင့်အုပ်စုလိုက်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုနှစ်သက်ပါ။ JIOCOCHAT တွင်0န်ထမ်း5ခုပါသောကွန်ဖရင့်ခန်းများကို ဖန်တီး. ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကိုနှစ်သက်ပါ။ အဆိုပါညီလာခံခန်းများအဲဒီမှာနေဖို့, ဒါကြောင့်သင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအုပ်စုအတွက်နောက်တဖန်အခန်းတစ်ခန်းကိုဖန်တီးရန်မလိုပါ။
◆ကြွယ်ဝသောစာတိုပေးပို့ရေး။ သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်စကားပြောပါ။ ဖိုင်များ, emoticon များ, ရုပ်ပုံများ, ရုပ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, အသံမှတ်စုများနှင့်ဒေသတွင်းစတစ်ကာများကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့စဉ်ဒေသတွင်းအင်ဒိုနီးရှားစတစ်ကာများကိုပေးပို့ပါ။ အဖွဲ့0င် 500 အထိအုပ်စုကြီးများကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်။
◆အိန္ဒိယစတစ်ကာများတွင်ပြုလုပ်သည်။ Jiochat သည်အိန္ဒိယရှိထင်ရှားသောအနုပညာရှင်အချို့နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်သင်၏စိတ်ခံစားမှုများကိုသင်၏ chats များတွင်သင်၏စိတ်ခံစားမှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ကူညီရန်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိထင်ရှားသောအနုပညာရှင်အချို့နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဟိန္ဒူ, ဘင်္ဂလီ, ကန်နာဂျီဂျပ်, ပရေလမ်, မလေးရှား, တမီးလ်, တီလီဂု, ဂန်ဂါစေးနှင့် Odia Stickers - ငါတို့အားလုံးကိုရရှိခဲ့သည်။ အိန္ဒိယပွဲတော်စတစ်ကာများတွင်အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုရှိသည်။
◆အမှတ်တံဆိပ်လိုင်းများ။ JIOCHAT တွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စကားပြောပါ။ မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြီးချက်ချင်းပြန်ကြားချက်ရယူပါ။ NEWSORY, TRAVENT, ခရီးသွားခြင်း, ခရီးသွားခြင်း, လမ်းကြောင်းများအပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးမှလိုင်းများမှအကောင်းဆုံးအရောင်းအ0ယ်များနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောကမ်းလှမ်းချက်များကိုပြုလုပ်ပါ။
နေ့စဉ်အက်ပလီကေးရှင်းပေါ်ရှိစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောဗီဒီယိုပုံပြင်များကိုကြည့်ပြီးသူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများနှင့်ပုံပြင်များဝေမျှပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မီဒီယာမိတ်ဖက်များသည်အစားအစာ, ခရီးသွားခြင်း, ဖျော်ဖြေရေး, ကျန်းမာရေးစသည့်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးတွင်ပုံပြင်များကိုထုတ်ဝေသည်။ သင့်အတွက်အထူးကုသပေးသည်။
◆အိန္ဒိယနိုင်ငံများအားလုံး။ JioChat တွင်သင်၏ဘာသာစကားကိုသင် ရွေးချယ်. app ကို Hindi, Marathi, Bengari, Kannada, Tamil, Tamil, Tamil, Tamil, Tamil, Tamil, Benglio, Odia တို့တွင်အသုံးပြုသည် ။
JioChat အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက JioChat အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် www.jiochat.com
Facebook တွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်မည်။ Twitter တွင် - www.twitter.com/jiochat
ဘာအသစ်လဲ JioChat: HD Video Call 3.2.8.6.0709